Ka hel kuwa raacsan barta Instagram ▷ ➡️ Kuwa raacsan ▷ ➡️
Kusoo raac kuwa raac boga Instagram
December 13, 2018 0 comments 1476
Kuwa isticmaala guriga iyo xirfadlayaal labadaba suuq-geynta suuqa Had iyo jeer waxay isku dayaan inay raadiyaan aaladda ugu fiican ee ay ku helaan taageerayaal barta Instagram. Si kastaba ha noqotee, algorithms-ka cusub ee shabakadan bulshada ayaa sii kordheysa suurtagalnimada tan adag, marka waa inaad doorataa tallaabooyinka ugu nabdoon ee sidaas lagu sameeyo.
Ka helitaanka kuwa raacsan barta Instagram waxay noqotay geedi socod u baahan shaqo badan iyo saacado badan. Xaqiiqdii, maahan wax fudud sida ay u egtahay. Si kastaba ha noqotee, Waxaan u adeegsan karnaa farsamooyin taxane ah oo runtii kori doona tirada kuwa raacsan ku jirta muuqaalkeena. Laakiin haddii aan rabno inaan siinno kor u qaad, isticmaalayaal badan oo badan ayaa raadinaya ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram.
Hashtags waxay noqdeen ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu sumadsiin karo daabacaadahayada. Sikastaba, waa inaad ogaataa sida loogu isticmaalo si wanaagsan si ay u yeeshaan saameynta ugu weyn. Waa inaad si cad u ogaataa waxyaabaha ku habboon xashiishad kasta oo daabacan. Intaa waxaa sii dheer, waa in aynaan ku dhaafin isticmaalkiisa, maxaa yeelay qaar ayaaba leh 10 - 12 boostada kasta ku filan Habka ugu fiican waa in la kala duwanaado in aan had iyo jeer lagu celiyo iyaga sidaasna ay ku gaaraan gaari weyn.
La falgal qoraalo kale
La falgalida xog kale waa mid kale oo ka mid ah farsamooyinka sida ugu badan loo adeegsado si loo helo kuwa raacsan barta Instagram. Sameynta faallooyinka iyo bixinta waxyaabaha lagu jecel yahay daabacaadaha kale waa habraacyo dadka cusub ku soo jiidan doono astaantaada. Ilaa iyo inta ay tahay is dhexgalka gebi ahaanba dabiiciga ah iyo kaas oo looga fogaanayo spam.
Mid ka mid ah farsamooyinka is-dhexgalka ayaa noqon kara wadashaqayn dadka kale Xisaabaadka Instagram. Qaabkaan, wadajirka wadajirka ah waa loo fulin karaa, abaabulista dhacdo udhaxeysa dhowr akoon, shidaal ka saarid qoraallo kale, wadaagida waxyaabaha ay kahadalsantahay oo lagusoo bandhigi karo doodaha kuwa raacsan, iwm.
Adeegso iidhehda Instagram
Xayeysiiska Instagram ayaa ah aalad aad u wanaagsan oo lagu kordhiyo aragtideena shabakadan bulshada. Waad ku mahadsan tahay, isticmaaleyaasha aan dooneynno inaan bartilmaameedsano ayaa si faahfaahsan looga soocay. Waxaa si fudud loo maareeyay Ads Ads iyo dhab ahaantii u shaqaysaa sidii xayeysiisyada xayeysiinta ah ee gudaha Instagram ku saleysan sawirada iyo fiidiyowyada.
Isticmaalka barta Instagram ee xayeysiinta ah waxay ku habboon tahay soo jiidashada kuwa raacsan tilmaamaha ganacsiga ama noocyada.
Samee fiidiyowyo iyo sheekooyin Live ah
Fiidiyowyada iyo Sheekooyinka Tooska ah sidoo kale waa kuwo aad u xiiso badan marka ay timaado helitaanka kuwa raacsan bogga Instagram. La yaab maahan, fiidiyowyada tooska ah waxaa badanaa lagu meeleeyaa meelaha ugu fiican Instagram. Sidoo kale, labada qalabba waxay siinayaan dareen ku soo dhowaansho iyo xasilooni isticmaaleyaasha kale. Waxay u badan tahay in sameynta fiidiyoow toos ah maalin kasta ama ugu yaraan 2-3 jeer usbuucii ay ku kasbanayaan kuwa raacsan.
Soo qaado waxyaabo tayo leh
Ugu dambeyntiina ma ahan, waa iska cadahay taasi Haddii aan u soo galinno tayo iyo waxyaabo caan ah astaanteena waxaan soo jiidan doonaa raaco badan. Sida caadiga ah, waxay jecel yihiin isbadal, sawirada daqiiqado qaas ah ama qoyska, sawirro leh qoraal dhiirrigelin leh iyo weedho dhiirrigelin leh, iwm.
Runtu waxay tahay inay jiraan xeelado iyo talooyin badan oo aad ku kasbato taageerayaal badan barta Instagram. Iyaga oo ku dhaqan galinayna waxaan dadka ku soo jiidan doonnaa astaanteenna.
1 Adeegso xashiish
2 La falgal qoraalo kale
3 Adeegso iidhehda Instagram
4 Samee fiidiyowyo iyo sheekooyin Live ah
5 Soo qaado waxyaabo tayo leh
Iibso kuwa raacsan Instagram ee Brazil
Shabakadaha bulshada ee shirkadaha